Fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny Atrikasa hijerena paikady mahomby sy maharitra mahakasika ny tsy fandriampahalemana | Primature
Mahazoarivo, 09 Aprily 2018 – Nanokatra amin’ny fomba ofisialy ny Atrikasa hijerena paikady mahomby sy maharitra mahakasika ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy ny praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Fivoriana izay ahitana ny fandraisan’anjara ny minisitera izay miahy mivantana ny fandriampahalemana dia ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena, ny Minisiteran’ny Fitsarana, ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka, ny Minisiteran’ny Atitany sy Fitsinjarampahefana, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandariamariam-pirenena ary ireo tomponandraikitra ambony ao anatin’ireo Minisitera ireo. Maharitra roa andro ny fanatanterahan’ity fivoriana izay atao amin’ny « villa basse » Mahazoarivo ity, ka hifarana rahampitso.
Izao fivoriana izao dia mitohy amin’ny fampanantenana nataon’ny praiminisitra, Mahafaly Solonandrasana Olivier, tamin’ny « team building » tany Mantasoa amin’ny hampivoriany ireo tomponandraikitra misahana ny tsy fandriampahalemana manerana an’i Madagasikara. Araka izany, hisy ny fijerevana ny paikady isaky ny distrika sy kaominina amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana. Olana amin’ny resaka tsy fandriampahalemana ny tsy fisian’ny fifandrindrana eo amin’ny tomponandraikitra isaky ny minisitera amin’ny fomba fiasa. Araka izany, fotoana entina anarenana ny tsy mety amin’izao fotoana izao.
Miseho amin’ny endrika maro ny tsy fandriampahalemana izay ahitana ny an-tanan-dehibe sy ny any ambanivohitra, ny fanakorontanana, ny fampielezana vaovao tsy marina amin’ny tambazotra serasera. « Tsy nikely soroka amin’ny fametrahana ny fanamby amin’ny tsy tsy fandriampahalemana ny fitondram-panjakana, saingy mbola misy ny indro kely satria taona tokony ametrahana ny fitoniana izao. Tsy maintsy nanao izao hetsika izao ny fitondrana mba hisian’ny fitoniana sy fandrosoana » hoy ny nambaran’ny Praiminisitra.
Nandritra ny lahateniny no nanamarihan’ny Praiminisitra fa “ilaina ny hetsika ho fanentanana ny namana rehetra rehetra eo anatrehan’ny fahamehana izay misy eto amin’ny firenena, ny amin’ny ahafantsika mamerina amin’ny fomba haingana ny fandriampahalemana satria betsaka ny toerana izay ahitana izany tsy fandriampahalemana izany, izay miseho amin’ny endrika maro. Mila finiavana sy fandraisana andraikitra ny ady atao amin’ny tsy fandriampahalemana”.
Nohamafisin’ny lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier fa tafiditra ao anatin’ny vina ny Filoham-pirenena mahakasika ny Fisandratana 2030 izao hetsika izao, izay resaka fampandrosoana, fijerena lavitra, fanasoavana an’i Madagasikara mba ahafahany mitraka ka hananany izay toerana maha-izy azy eo amin’izao tontolo izao. Nambarany ihany koa fa « tsy misy ny fampandrosoana vanona eto Madagasikara raha tsy misy ny fandriampahalemana . Manentana antsika izay tafavory eto aho mba handray ny andraikitra manomboka androany. Efa betsaka ny ezaka, fa tsy vitsy arak’izany ihany koa ny andraikitra izay tokony hotontosaintsika mba ahafahana mamerina ny tsy fandriampahalemana mba hananan’ny vahoaka fitokisana antsika tsirairay avy satria raha very ny fitokisana dia azo lazaina fa tsy misy ny fisian’ny fanjakana sahalan’ny amin’ny hoe tsy misy ny fahefam-panjakana. Taona miavaka ity taona ity satria taona hanatontosana ny fifidianana ary ilain’ny vahoaka ny miaina ao anatin’ny fitoniana sy manana fahatsapana fa miaro azy sy ny fananany ny fitondram-panjakana. Tsy kabary tsara lahatra intsony no tian’ny vahoaka ho hita fa vokatra azo tsapain tanana avy hatrany. Ny fisian’ny fanjakana no ilain’ny vahoaka. Mino aho fa aorian’ny 2 andro dia hisy vokany any amin’ny vahoaka izao fivoriana izao.”
Le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a reçu une délégation de l’Union Internationale du Notariat →